Hoogganaan garee fincile kan Tigraay Jmaata har’aa akka beeksisanitti waraansa baatii tokkoof tureen booda harka loltoota federaalaa kan seente magaalaa Maqalee keessatti hiriirri mormii geggeessamaa jira jedhan. Haata’u malee TV mootummaa gabaa magaalaa Maqalee keessatti uummati bittaa fi gurgurtaa geggeessaa kan jiruu fi namoota barcuma xixiqqoo irra ta’an mul’isee jira.
Kan haaraa muudaman hoogganaan bulchiinsa yeroofii gama isaaniin naannoon sun gara nageenyaatti deebi’aa jira jedhan.
Lolli waraana federaalaa kan muummicha ministeeraa Abiy Ahimed fi humnoota adda bilisummaa uummata Tigraayiif amanamoo ta’an gidduutti geggeessamu Sadaasa 4 jalqabe.
Quunnamtiin jiraachuu dhabuu isaaf sabaa himaaleen dhaqqauu dhabuun gam lamaan biraa haala uumame jedhame mirkaneessuun rakkisaa ta’ee jira. Haa ta’u malee uummanni 45,000 biyya hollaa Sudaanitti baqachuu isaanii fi kumaan kanneen laka’aman immoo dhumaniiru jedhamee amanama. Tigraay keessatti waggoota dheeraa dhaaf deggersa uummataa cimaa qabu kan turan hoogganoonni IWEHAT gara gaarreen naannoo jiranitti baqachuu dhaan waraansa ripxe loltummaa kan eegalan fakkaata.
Garee IWEHAT keessaa adda durummaan kan barbaadaman Debretsiyoon Gebremikaa’el dhaabbata oduu Rooyitersiif ergaa barreeffamaa jimaata har’aa erganiin loltoota Eertraatiin saamichi kan irratti raawwate magaalaan jiraattota 500,000 qabudu Maqalee keessatti hiriirri mormii akka ture ibsan. Loltoonni Eertraa bakka mara jiru kan jedhan Debretsiyoon prezidaant Isaayaas Afewerqii diina lamaan isaanii kan ta’e irratti akka duulaniif Abiyyiin deggeruuf jecha loltoota isaanii gara naannoo daangaatti ergan jechuun irra deebi’uun himatan.
Itiyooopiyaa fi Eertraan lamaanuu himannaa kana ni haalan. Uummati keenya kan magaalaa keessaa saamicha isaanii mormaa jira, booji’amtootas of harkaa qabna, garuu raga qabatamaa walitti qabaa jirra kan jedhan Kan umuriin waggaa 57 fi qindeessaa quunnamtii raadiyoo repxe lolaa duraanii fi Abiy waliin mootummaa federaalaa keessa kan uran Debretsiyoon, waa’ee saamicha jedhaniis ta’e loltoonni Eertraa gamas jiraachuu raga tokko iyyuu hin dhiyeessine.